Fialana andraikitra - Cazoo
Ny fampahalalana sy ny hevitra, ny fikarohana ary ny fandinihana natao hametrahana ny pejy amin'ity tranokala ity dia tsy tokony horaisina ho torohevitra mivantana na ankolaka hanokatra kaonty fifanakalozana sy / na hampiasam-bola amin'ny varotra cryptocurrency.
Ny Cryptocurrency dia naseho ara-tantara fa misy fiovan'ny vidiny lehibe, ary tsy azon'ny tsirairay atao izany. Amin'izao fotoana izao, ny varotra cryptocurrency dia tsy manara-maso ny rafitra fandrindrana ny EU.
Cazoo.it dia tsy manolotra, mitantana na manome karazana serivisy ara-bola.
Ao amin'ireo lahatsoratra dia faritana ho a isan'andro Fanamarihana: tranokala fianarana manome fampahalalana momba ny tsenan'ny cryptocurrency. Ny fanambarana rehetra momba ny tombom-barotra na ny vola azo, voalaza na tsy voatanisa, dia tsy maneho antoka.